Tarsan oo kulan la qaatay Dhalinyarada mutadawiciinta ah ee Muqdisho – idalenews.com
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta kulan la qaatay dhallinyarada mutadawaciinta ah ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho.
Kulankani uu duqa magaalada Muqdisho la yeeshay dhaliyarada Mutadaciinta Muqdisho ayaa waxaa uu ahaa mid lagu dhiiragalinayay kaalinta ay ka qaateen gargaarkii caafimaad ee todobaadkani maamulka gobolka iyo ciidamada AMISOM ay ka hir galiyeen magaalada Muqdisho.
Kulankani ayaa inta uu socday waxaa looga hadlay waxqabadkii dhaliyarada mutadawaciinta Muqdisho ay ka sameeyeen dowr howleedkooda.
Mudane Maxamuud Axmed Nuur “Tarsan” guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ku tilmaamay dhaliyarada mutadawciinta Muqdisho in ay yihiin kuwo qeyb muuqata ka qaatay howlo badan oo bilicda Muqdisho loogu soo celinayay.
Mudane Tarsan waxaa uu ku booriyay dhalinyarada Mutadawaciinta ah in ay sii laba jibaaraan dedaalkooda ku aadan howlaha ay wadaan.
Sidoo kale duqa magaalada Muqdisho waxaa uu tilmaamay in xal u helida mushaakilka taagan uu yahay mid ay tir tiri karaan dhaliyarada inta badana dhibaatada ay tahay mid iyaga ku dhacda.
Kulankani uu gudoomiyaha gobolka Banaadir la qaatay ururka dhaliyarada mutadawaciinta Muqdisho ayaa waxaa uu yahay mid todobaadkiiba mar ay isugu yimaadaan dhaliyaradaasi isla markaana looga arinsado sidii loo sii anbaqaadi lahaa dedaalka ay wadaan ee ku aadan dib u dhiska dalka iyo ammaan ku soo celintiisa.